समाज Archives - Page 166 of 189 - Dna Nepal
भद्रकाली दिदी बहिनी समूह नमुना कार्य गर्न सफल
पोखरा, असार ४ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको भद्रकाली दिदिबहिनी समुहले पोखरा मै नमूना कार्य गर्न सफल भएको छ । “आफ्नो घरआँगन आफै सफा राखौ फोहर लाई मोहरमा परिणत गरौं“ भन्ने नाराका साथ महानगरको निति नियमानुसार वडा नं १० ले टोल टोलमा..
पोखरामा यति एयरको जहाज ठुलो दुर्घटनाबाट यसरी जोगियो (भिडियोमा हेर्नुस्) ३ असार २०७५, आईतवार ११:४८
पोखरा, असार ३ । काठमाडौबाट पोखरा आउदै गरेको यति एयरलाइन्सको विमान ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा जहाजको हाइड्रोलिक फेल भएपछि जहाज धावन मार्गबाट घाँसे मैदानमा पुगेको छ । यति एयरको नाइन एन एएचयु ६८१ कलसाइन..
छाडा चौपायाबाट जोगिन खोज्दा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु १ असार २०७५, शुक्रबार ०३:४५
भरतपुर, असार १ । भक्तपुर।स्थानीय सल्लाघारीमा आज भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ भने पछाडि सवार गम्भीर घाइते भएका छन् । नयाँ ठिमीबाट सल्लाघारीतर्फ जाने क्रममा सडकका रहेको चौपायासँग ठोक्किनबाट जोगिन खोज्दा बा ५५ प २५२७..
पोखरा, असार १ । पृथ्वी राजमार्ग अन्र्तगत चितवनको चुम्लिङटारमा आज बिहान माईक्रो र ट्रक ठोकिँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । अरु ७ जना घाईते भएका छन् । पोखराबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको ग १ ख ७६९२ नम्बरको माइक्रोबसलाई काठमाडौंबाट मुग्लिनतर्फ आउँदै..
टाटासुमोको ठक्करले महिलाको मृत्यु
पोखरा, असार १ । आँबुखैरेनी–गोरखा सडक खण्डको तीन किलोमा गएराती टाटासुमोको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यू भएको छ । आँबुखैरेनीबाट गोरखातर्फ जाँदै गरेको ग १ ज ६५९४ नम्बरको सुमोले पानी लिएर घरतर्फ जाँदा बाटो काट्दै गरेकी गोरखा नगरपालिका १३ सिमलगैरीकी..
सराङकोटको बेवारिसे शव, खुलेन पहिचान ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ०४:०१
पोखरा, जेठ ३१ । पोखराको सराङकोटमा अघिल्लो साता फेला परेको शवको पहिचान खुल्न सकेको छैन । जेठ २३ गते सराङकोट स्थित देउराली घुम्ति नजिक सडक किनारमा शव भेटिएको थियो । अन्दाजी २५÷३० बर्षजस्तो देखिने महिलाको शव अहिलेसम्म सनाखत हुन नसकेको प्रहरीले..
पूर्वयुवराज पारसलाई ट्राफिकले समात्यो
काठमाण्डौं, जेठ ३१ । ट्राफिक नियमको बेवास्ता गर्दै तीव्र गतिमा गाडी हाँक्ने पारस ट्राफिकको फन्दामा परेका छन् । पारसले तीव्र गतिमा चलाएको बा.१४ प २१३१ नम्बरको गाडी प्रहरीले समातेको हो । जावलाखेलदेखि हुँइकिएका उनलाई जावलाखेल प्रहरीले सोमबार..
पोखरामा एक युवकले गरे आत्महत्या ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार १२:४०
पोखरा, जेठ ३० । पोखरा चिप्लेढुंगाका एक युवकले आत्महत्या गरेका छन् । पोखराको ड्यामसाईडस्थित होटल न्यु नेचरल्याण्डमा उनले आत्महत्या गरेका हुन् । पोखरा लेखनाथ ४ चिप्लेढुंगा घर ठेगाना इन्ट्री गरेका २५ वर्षिय कृष्ण सिम्खडाले आत्महत्या गरेको..
पोखरामा यस्तो घटना–छोरो र श्रीमतीको घाँटी रेटेर आफै रेटिए राम्जी !
पोखरा, जेठ ३० । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं १५ रामबजारमा एकै परिवारका तीन जनाको घाँटी रेटिएको छ । छोराको मृत्यु भएको छ । आमा र बावुको भने पोखराका दुई अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ । रामबजार १५ कालिका मार्गमा रामजी घलेको ११ वर्षिय छोरा ज्ञापन..